China XBD Series Double Suction Firefighting Pump mpanamboatra sy mpamatsy | KAIQUAN
XBD andian-tsarimihetsika elektronika mitsivalana avo roa heny dia vokatra novokarin'ny orinasanay araka ny fangatahan'ny tsena. Ny zava-bita sy ny fepetra ara-teknika mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny paompy afo nasionaly GB 6245.
XBD andian-tsarimihetsika elektronika mitsivalana avo roa heny dia vokatra novokarin'ny orinasanay araka ny fangatahan'ny tsena. Ny zava-bita sy ny fepetra ara-teknika mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny paompy afo nasionaly GB 6245. Ny vokatra dia notsapaina tamin'ny foibem-panaraha-maso sy fanadinana kalitao fiarovana ny afo nasionaly ary nandalo ny fanombanana ireo vokatra vaovao any Shanghai, ary nahazo ny taratasy fanamarinana fankatoavana ny vokatra fiarovana afo any Shanghai.
XBD andian-tsarimihetsika elektronika mitsivalana indroa mipetaka misy setroka mikoriana sy tsindry, karazana fizarana karazany ary haavo avo. Ny motera môtô dia manana safidy 380V, 6000V ary 10000v maro, izay afaka mifanaraka tsara amin'ny fangatahana afo sy ny fisafidianana ny famolavolana gorodona sy fanoherana fantsona samihafa.
XBD andian-tsarimihetsika avo lenta misokatra roa paompy setroka paompy napetraka vokatra tonga any an-toerana ambaratonga ambaratonga, miaraka amin'ny firafitra antonony, ambany tabataba, tsara fampisehoana, azo itokisana asa sy ny tombontsoa hafa.
Hafainganana: 1480/2960 rpm
TOSIKARATRA: 380V, 6KV, 10KV
Sahan-drano: ≤ 80 ℃ (rano madio)
Haavo isan-karazany: 30 ~ 600 L / S
Isan'ny tsindry: 0.32 ~ 2.5 Mpa
Tsindry azo omena Max: 0.4 Mpa
Teo aloha: Paompy famonoana afo an'ny XBD-DP
Manaraka: Paompy famonoana afo miady amin'ny axis lava XBD